Programmer Diaries: August 2012
Posted by JDC at 4:06 PM0comments
အရေးကြီးပြီ ညီအကို ညီအမတို့
ငါတို့ ညီစွာ ဆန့်ကျင်ကြစို့
ငါတို့ တွန်းလှန် ခြေမှုန်းကြစို့
ငါတို့ ဘာသာ သာသနာကို ငါတို့ ကိုယ်တိုင်
Posted by JDC at 9:01 AM0comments
၁။ ငါဟာ မလိမ်ဘူး။
၂။ ငါဟာ တာဝန်ယူပြီးရင် ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်။
၃။ ငါဟာ ငါ့တန်ဖိုးကိုငါသိတယ်။
၄။ ငါဟာ ငါ့လုပ်ရပ်အတွက် အခကျေးငွေကို ငါကိုယ်တိုင် ကြေနပ်စွာရယူတယ်။
၅။ ငါဟာ ငါ့တန်ဖိုးကို အခြားလူတစ်ယောက်က ဈေးလာဖြတ်တာ လက်မခံနိုင်ဘူး။
အဲ့ဒီတော့ မင်းမကျေနပ်ရင် ငါနဲ့ လာအတူတူ အလုပ်မလုပ်နဲ့။
မှတ်ထားဖို့ကတော့ မင်းငါ့ကို ဘယ်တော့မှ ဈေးလာမစစ်နဲ့။
သိထားဖို့က ငါ့မကြိုက်ရင် ငါဘာမှမလုပ်ဘူး။
Posted by JDC at 10:18 AM 1 comments
After downloading Execute the installer
Press Finish , You'll see the scratch browser.
Enjoy the programming.
Posted by JDC at 7:24 AM0comments